तिमि कहाँ छ्यौ सबिना ? ८ वर्ष देखि जापानमा बेपत्ता यि चेलीलाई भेट्नु भएको छ ! भिडियो सहित हेर्नुहोस – Complete Nepali News Portal
तिमि कहाँ छ्यौ सबिना ? ८ वर्ष देखि जापानमा बेपत्ता यि चेलीलाई भेट्नु भएको छ ! भिडियो सहित हेर्नुहोस
September 8, 2017	334 Views
सविना महर्जन अध्ययनका लागि सन् २००८ मा जापान आइन् । सन् २००९ सम्म परिवारको सम्पर्क र नियमीत रुपमा साथिभाइसँग सम्पर्कमा रहेकी सविना एकाएक बेपत्ता भइन् ।
बिना कुनै खवर बेपत्ता भएपछि आफ्नी छोरिको खोजिमा सविनाका वुवा समेत जापान आउनुभयो । जापान प्रहरी, नेपाली समुदाय, चिनेजानेका, सबिनाका साथि सबै भेटे तर कहिँबाट केही पत्तो लाग्न नसकेपछि उहाँ करिव ३ साता जापान बसेर फर्कनुभयो ।
छोरि खोजेर पत्ता लगाइदिने भन्दै उल्टै आशा देखाउँदै जापानी प्रहरीले घटना बाहिर नल्याउन भन्दै खोजिरहेको जवाफ दिएर फर्कायो ।
तर नेपाल फर्कीएपछि बेपत्ता सबिनाबारे न जापानी प्रहरीले केही जानकारी दियो न त सबिनाको पत्तो नै लगायो ।
नेपाल स्थित जापानी दुतावासमा समेत कयौंपटक धाएपनि कुनै पत्तो लाग्न नसकेपछि परिवारजन निरास भयो । यो निरासा दिन महिना हुँदै अहिले ८ बर्ष बितिसकेको छ । तरपनि झिनो आसा राख्दै दिदी बिना महर्जनले आफ्नो पिडा सामाजिक सञ्जालमा पोखेपछि यो कुराले फेरी चर्चा पाएको छ ।
ललितपुर ३ पुल्चोक कि सविनाको खोजिमा सहयोग गरिदिन बिना र उनको परिवारले आग्रह गरेको छ ।
टपनेपालन्युजसँगको कुराकानीमा बिना महर्जनले भन्नुभयो-‘अहिलेसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन, हामी अझै जापानमा रहनुभएका नेपालीहरुको साथ र सहयोगबाट सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने आशामा छौं ।’
बेपत्ता हुनु अघिसम्म सबिना फुकोओकामा बस्ने गरेकी थिइन् । फुकोओकाको मिनामी वार्डमा बस्ने गरेकी सबिना बेपत्ता भएपछि उनिबारेमा थप जानकारी बारे जापान प्रहरीले केहि जानकारी नदिएको दिदी बिनाको भनाई छ ।
सन् २०१३ अक्टोवर १३ मा सविनाका बुबा सानुलाल महर्जनले बेपत्ता सबिना खोजि गरिदिन भन्दै जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा निवेदन समेत दिएका थिए ।
२००८ अगष्ट २७ तारिखमा सविना स्कुलमा नदेखिए पछि उनलाई स्कुलका स्टाफले फोन गर्दा उनले आफ्नो साईकल पन्चर भएको हुनाले आफू स्कुल आउन ढिलो हुने बताएकी थिईन् ।
त्यसपछि उनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनि सम्पर्कमा नआएको बताईएको थियो ।
अगष्ट २६ सम्म सविना संग सम्पर्क भएको र अवस्था बुझ्दा सबै ठिक भएको जवाफ आएको तर अगष्ट २८ मा उनलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन नउठेको बताइन्छ ।
फोन नउठिसकेपछि अगष्ट ३१ मा सविनाकी साथी सविना बस्ने गरेको कोठामा जाँदा उनको कोठा बन्द भएको खुलेको थियो ।
सविनाको बुबा लगायत परिवारले पटक पटक जापान प्रहरीलाई खोजविनको लागि अनुरोध गरेको तर ८ वर्ष सम्म पनि त्यसको कुनै प्रतिफल ननिस्किएको बिनाको भनाई छ ।
परिवारले यत्तिका वर्ष सम्म पनि सविनाको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्नुमा जापानी प्रहरीको कार्यक्षमता तथा उनीहरुको रवैया प्रति नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
नेपाली चेली तथा नेपाली नागरिकको हैसियतमा समेत जापानमा बेपत्ता हुँदा जापानमा रहेको नेपाली दूतावासले जापानी प्रहरी र प्रशासनसँग सशक्त रुपमा खोजिको पहल गरिदिन आग्रह र जानकारी लिने काम नगरिदिंदा जापानी प्रहरीले समेत पुरानो घटनाको बहानामा वेवास्ता गर्न थालेको देखिएको छ ।
आफ्नो नागरिक बेपत्ता भएको ८ बर्षसम्म पत्तो लगाउन नेपाली दूतावासले खेलेको भूमिका आशा लाग्दो नदेखिएपछि परिवारजन थप निरास भएका छन् ।
नेपालबाट जापान अध्ययनको लागि पठाएको स्ट्याण्डर्ड ल्याग्वेज इन्टिच्युटले पनि सबिनाको खोजिको लागि कुनै पहल नगरिदिएको बिनाले जानकारी दिनुभयो ।
स्मरणीय छ दुई बर्ष अघिपनि जापानको सेन्दाईबाट एक नेपाली युवती बेपत्ता भएकी थिइन् । गुरुगं थर भएकी ति युवतिले मलाई धेरै बाच्ने रहर छैन भनेर लेखेको भेटिएको बताइएपनि अहिलेसम्म उनको कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन ।
जापानी प्रहरीले उनको पनि खोजि भइरहेको बताएपनि उनीबारेको सत्यतथ्य जानकारी अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।
जापानमा जापानी प्रशासन र प्रहरीले बिदेशी नागरिकहरुलाई दोस्रो नजरले हेर्ने, व्यवहार गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस बाहेक पनि एशियन मुलुकका नागरिकमाथि बढि केरकार र उनिहरुका समस्याको सुनुवाइमा बेवास्ता गर्ने आम आरोप लागि राख्दा बेपत्ता नेपाली नागरिकबारे कुनै जानकारी नहुनुले त्यस्ता आरोपहरुमाथि बल पुगेको देखिन्छ ।
यसैगरि जापानमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, उनिहरुको अवस्था आदिको बारेमा जानकारी लिन र राख्न नेपाली दूतावासले खेलिरहेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ भने जापानमा रहेका साझा भनिने संगठन देखी जिल्ला र जात, थरका आधारमा समेत खोलिएका सयौं संस्थाहरुको उपादेयता माथि समेत पिडित परिवारजनसँगै जापानमा रहेका नेपालीहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । (टोपनेपालन्युजको सहयोगमा)